Success Stories - Cherry FM
Audience များနှင့်ထပ်တူကျသော ၊ပရိသတ်များ၏အားပေးမှုအပြည့်အ၀ရရှိထားသော "Cherry FM "
NGO အဖွဲ့တခု၏စစ်တမ်းအရအကောင်းဆုံး Media Channel အဖြစ်ပြသော"Cherry FM"
Cherry FM-it is so popular nowadays. Everyone listens and taking wherever they go. It was broad-casted the whole day and in many local languages such as Shan and Pa-O.When there is electricity problem,more and more people listen FM radio. For those working in the farms, they listen while working. Everyone can afford to buyaradio which is cheap and cost only about 3000 kyats, Sellers also open it while selling.
CHERRY FM (5) နှစ်ပြည့် Free Show ပွဲအား တောင်ကြီးမြို့ကျောက်တိုင်အားကစားကွင်းတွင် အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ R ဇာနည် ၊ ဟန်ထူးလွင် ၊ ဂျီလတ် ၊ သအို ၊ Ar-T ၊ ရဲရင့်အောင် ၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၊ သီရိဆွေ ၊ ငယ်ငယ် ၊ စန္ဒီမြင့်လွင် ၊ မိစန္ဒီ ၊ ခင်စုစုနိုင် ၊ ထွန်းရတီ ၊ ပိုပိုဟေသာ စသည့် အနုပညာရှင်များစွာနှင့်အတူ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ရာ လူဦးရေ (၂) သိန်းကျော် လာရောက်အားပေးခဲ့ပြီး အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
CHERRY FM 5th Anniversary Audio CD အားထွက်ပြီး (၂) ပတ်မှစတင်၍ အရောင်းရဆုံး တေးစီးရီးတွင် နံပါတ် (1) အဖြစ် စာရင်းစ၀င်ခဲ့ပါသည်။